Introduction | Danya Wadi
Who are the Rohingya and why are they fleeing? Video ( CNN )
By danyawadi November 29, 2017 Leaveacomment
What is the human being born in other religions without Islam? :- Answering Dr. Zakir Naik.
By danyawadi November 26, 2017 Leaveacomment
ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে জন্মগ্রহন করা মানুষের কি হবে? :- উত্তর দিচ্ছেন ডক্টর জাকির নায়েক। অনেকের মনে এই প্রশ্নটি, তাই শেয়ার করে তাদের জানিয়ে দিন। What is the human being born in other religions without Islam? :- Answering Dr. Zakir Naik. A lot of people remember this question, so share them
By danyawadi October 12, 2017 Leaveacomment
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြည်သူသို့ တင်ပြချက် ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။ ဦးစွာ ပထမ၊ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နားလည်မှု အပြည့် အဝနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး ကျွန်မတို့အစိုးရကို ဝန်းရံပေးတဲ့အတွက်၊ အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။ပြည်သူရဲ့ ထောက်ခံမှု၊ ပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်မှု၊ ပြည်သူရဲ့ ညီညွှတ်မှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ ဘာအင်အား မှမရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ပဲ ကြုံတွေ့ရပါစေ၊ ပြည်သူရဲ့ ညီညွှတ်မှုအင်အားနဲ့ ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေသိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ၊ယခင်နှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲစခန်းများ အတိုက်အခိုက်ခံရမှုမှ စတင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ကြောင့် ဆက်လက် ကြီးထွားလာရတဲ့ ပြဿနာများအပေါ် ကမ္ဘာ့အာရုံစိုက်မှုဟာ အင်မတန်မှ ကြီးမားပါတယ်။ […]
ရိုဟင်ဂျာ အရေး ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေခဲ့ (Video)
By danyawadi September 22, 2017 Leaveacomment
Danyawadi Introduction: ဓည၀တီ မိတ်ဆက် စကား
By danyawadi December 9, 2014 Leaveacomment
Danyawadi (https://danyawadi.wordpress.com) Danyawadi ဆိုဒ်သည် ဝင်ရန် ၅ စက္ကန့်ကြာသည်။ Danyawadi တွင် ဒေါင်းလော့ဒ်လင့်များ ကို နီညိုရောင်ဖြင့် ဖော်ပြ သည်။ ခေါင်း ကြီးပိုင်း သတင်းများအားအနီရောင်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ Danyawadi ၏ သတင်းရင်းမြစ်အနေဖြင့် မြန်မာမှုခင်းသတင်းများ၊ ရခိုင် အရေး အခင်း၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေးများ ကိုအသားပေးဖော်ပြသည်။ Danyawadi သည် မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ် များအတွက် ပညာပေး ဆောင်း ပါး များကို အသားပေးရေးသားလေ့ရှိသည်။ Danyawadi တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦး ပြစ်မှု ကျူးလွန် ခြင်းမရှိ ဟု ထွက်စာ ကို ထိုင်းအစိုးရရှေ့နေ့ရုံးများသို့ ပေး ပို့သောသတင်းများ ကိုရေးသား ဖော်ပြ ထား ပါ သည်။ Danyawadi […]